बोल्दैनन मिलन र प्रदिप:जो संग काम गर्यो त्यहि संग सम्बन्ध चिसो ,आखिर गल्ति कसको ? | Rajmarga
बोल्दैनन मिलन र प्रदिप:जो संग काम गर्यो त्यहि संग सम्बन्ध चिसो ,आखिर गल्ति कसको ?
अभिनेता प्रदिप खड्काले ‘ठुलो मान्छे’ नामक चलचित्र निर्माण गरेर चलचित्र नगरीमा भित्रीएका थिए। निर्माण गरेको पहिलो चलचित्र असफल बनेपछि उनले ‘इस्केप’ चलचित्रमा अभिनय गरे। तर चलचित्रलाई कपिको आरोप लाग्यो र सुपरफ्लप बन्यो। त्यसपश्चात विदेश जाने सोचाइमा रहेका प्रदीपको करियरको टर्नीङ पोइन्ट बन्यो ‘प्रेमगीत’ । लभस्टोरी जनराको चलचित्र निर्माणमा सक्षम मानिएका निर्देशक सुदर्शन थापा उनको करियर बदल्न सफल भए। त्यसपश्चात उनको क्रेज र माग दुवै बजारमा बढ्यो।
प्रेमगीत २, लिलिबिली उनको प्रदर्शनमा आइसकेका चलचित्रमा पर्दछन्। दुवै चलचित्रले दर्शकको राम्रो साथ पाए। अब उनि नयाँ चलचित्र रोजीको तयारीमा रहेका छन्।
तर प्रदिप जुन चलचित्रमा काम गर्दछन्, त्यो चलचित्रको निर्माण टिम संग उनको सम्बन्ध सुमधुर देखिदैन। पहिलो हिट चलचित्र प्रेमगीत निर्देशक सुदर्शन थापा र अभिनेत्री पूजा शर्मा संगको उनको झगडाले मिडियामा निकै राम्रो स्थान पायो। यी दुवै संग उनको पानि बाराबारको स्थिति नै रहेको थियो। केहि समय अगाडी पुजा संग उनको केहि सम्बन्ध सुधार भएको देखिए पनि निर्देशक थापा संग उनको सम्बन्ध उस्तै चिसो रहेको छ।
दोश्रो चलचित्र प्रेम गीत २ टिम संग पनि उनको खासै राम्रो सम्बन्ध नरहेको हल्ला सुनिन्छ। यहि भिडमा चलचित्र ‘लिलिबिली’ निर्देशक मिलन चाम्स संगको सम्बन्ध पनि पानि बाराबारको स्थितिमा पुगेको छ। दुवैको चिसिएको सम्बन्ध केहि दिन अगाडी सम्पन्न एक अवार्ड समारोहमा देखिएको थियो। दुवै एक अर्कालाई इग्नोर गरेका थिए।
यहि बिषयमा निर्देशक मिलन चाम्सले एक अनलाइन मिडिया संग कुरा गर्दै प्रदिपको एटिच्युटका कारण आफुले नै इग्नोर गर्न सुरु गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।नेपाली चलचित्र नगरी यसै विकसित हुदै गरेको छ। यस्तो बिचमा राम्रो भनिएका ब्यानर र आफुले काम गरेका चलचित्र टिम संग सम्बन्ध चिस्याउदै जाने हो भने भविष्य के होला भनेर उनले सोच्न जरुरि देखिन्छ।
केहि चलचित्रमा सफल हुदैमा आफ्नो एटिच्युट देखाउने हो भने भोलिको दिनमा काम गर्न नै असहज हुने र करियर दाउमा लाग्ने स्पष्ट देखिन्छ।
Previous post: एमाले-माओवादी: निर्णायक चरणमा विलय र फुटको शंका
Next post: ६ बर्षकी छोरीसँग आफ्नै पिताले गरे विवाह, यस्तो छ विवाहको कारण !!
दीप र जसिताको जोडी लभ स्टेशनको घाम जुन…मा जम्यो
एकनारायण भण्डारीको लय सिर्जनामा फेरी अर्को मार्मिक कोशेली ‘नोकरानी’ (भिडियो)
नेपाली युवकसँग बिहे गर्दै बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, को हुन् शक्ति कपूरका नेपाली ज्वाइँ?
तिमीलाई माया गर्छु भन्दै भारतबाट आए चौधरी (भिडियोसहित)